Custom Board Game Card Printing Manufacturer | HS Boardgame Printing
HS dia nanome serivisy fanontana lalao board sy serivisy namboarina hatramin'ny taona 2002.
Lalao Board Packaging
Fonosana Boaty taratasy
18 taona fonosana matihanina sy mpanamboatra lalao board mahazatra
Famolavolana namboarina ho an'ny fanontana sy famonosana vokatra, mamorona fonosana tsy manam-paharoa amin'ny sarin'ny marikao ary manatsara ny varotrao vokatra. Ny orinasa fanontam-pirinty HS boardgame dia manana ekipa mpanamboatra fonosana efa za-draharaha maherin'ny 40, traikefa indostrialy mihoatra ny 10 taona, mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, ho an'ny fanamboarana manokana manokana, tsy nety hitovy, vokatra amidy any Japon, Alemana, Etazonia sy ny hafa. firenena, ny vokatry ny famolavolana dia fantatra be.
Hongsheng, toy ny iray amin'ireo tsara indrindra fanontam-pirinty karatra sy ny fomba amam-panao birao lalao mpanamboatra ao Shina, indrindra manokana amin'ny birao lalao fanontam-pirinty, sary boky fanontam-pirinty, telo-dimensional fanontam-boky, kilalao elektronika fanabeazana ho an'ny ankizy, fitaovana fampianarana, boutique loko boaty, ary avo- faran'ny fanomezana boaty sns, matihanina mba hanome mpanjifa isan-karazany ny vokatra vita pirinty.
Nanomboka tamin'ny taona 2002, amin'ny maha mpanamboatra sy mpanondrana OEM/ODM mivantana sy matihanina ao Shina, ny HongSheng Manufactory dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lalao board, lalao karatra, karatra filalaovana, singa lalao ary boaty fonosana.
Hongsheng Printing - High Quality Customized PET mangarahara telefaona boaty famonosana telefaona miaraka amin'ny hook plastika Ungrouped
Amin'ny ankapobeny, ny endriky ny Paper Boxes, ny endri-javatra, ny fonosana, sns. dia mety ho antony lehibe mahasarika ny mpanjifa. Ao amin'ny dingan'ny fampandrosoana ny birao lalao fanontam-pirinty, loko boaty fanontam-pirinty, taratasy boaty, boky, ny mpamorona dia nanaraka ny fironana farany sy ny famakafakana mpanjifa 'tsiro, noho izany, manao ny birao lalao fanontam-pirinty, loko boaty fanontam-pirinty, taratasy boaty, boky tsy manam-paharoa amin'ny rafitra sy ny fomba famolavolana azy. Mikasika ny endri-javatra, miezaka ny hampiavaka azy amin'ny fampiasana akora avo lenta izahay.
Fanontam-pirinty Hongsheng - Boaty vita amin'ny vidin'ny orinasa vita amin'ny telefaona finday avo lenta avo lenta amin'ny telefaona finday mpanamboatra boaty fanontam-pirinty fonosana boaty manokana
Nahazo ny saina sy ny fiderana ambony avy amin'ny mpanjifa ny teknolojia avo lenta avo lenta finday avo lenta famonosana boaty fonosana fanontam-pirinty fanontam-pirinty.
Fanontam-pirinty Hongsheng - Famantarana lalao an-trano piozila avo lenta sy karatra fanontana CMYK ho an'ny ankizy Varotra mafana
Amin'ny ankapobeny, ny fanontam-pirinty board game, ny fanontam-pirinty miloko, ny boaty taratasy, ny fampisehoana boky ary ny kalitaony dia tapa-kevitra amin'ny akora fototra. Raha ny akora manta amin'ny Board Game dia nandalo fitsapana maro momba ny singa simika sy ny zava-bitany izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny kalitaon'ny vokatra dia azo antoka avy amin'ny loharano. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia nosedraina ho tsara sy ny fananana hafa.
Hongsheng Custom Board Game Mpanamboatra karatra fanontam-pirinty
Mamorona sary marika tokana amin'ny fonosanao, manatsara ny herin'ny varotra vokatra.
Manana ekipa mpanamboatra fonosana efa za-draharaha mihoatra ny 40 izahay ary mihoatra ny 10 taona traikefa amin'ny indostria. Afaka mampifanaraka ny vokatray araka ny filantsika isika. Izahay ihany no manao azy ireo ho anao. Lavintsika ny hitovy.
Ny vokatra dia amidy tsara any Japon, Alemaina, Etazonia sy ny firenena hafa, ary ny endriky ny vokany dia fantatra be.
Mifantoka amin'ny fanontam-pirinty sy famonosana karatra fanao amin'ny lalao board nandritra ny 19 taona, nanendry mpiara-miasa ny orinasa kilalao fanabeazana Japoney. Ny foiben'ny Dongguan dia manana 8.500 metatra toradroa tranobe matanjaka ary mpiasa matihanina sy teknika maherin'ny 300. Tamin'ny Septambra 2017, ny sampana Huizhou, izay mivelatra maherin'ny 20.000 metatra toradroa, dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy. Nahazo mari-pankasitrahana maro toy ny "Excellent Supplier of Guangdong Province", "Supplier Evaluation Certificate", "The Eighth Top Ten Boss Awards in Guangzhou District", "The Eighth Top Ten Boss Awards", Mifanaraka amin'ny orinasa fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001.
Nahazo fifanarahana fiaraha-miasa maharitra ny HAMA sy ny orinasanay
Hongsheng dia manome anao amin'ny fanontam-pirinty karatra sy ny vahaolana fonosana manokana ho anao!
Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2001, ny orinasa mpanao pirinty HS boardgame dia niorina tamin'ny foto-kevitry ny "mpanjifa voalohany, kalitao voalohany, tsara indrindra, fanatsarana mitohy." Miorina amin'ny tsena, nahazo ny fahatokisana sy ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny sehatra rehetra. Nanangana rafitra kalitao tonga lafatra tamin'ny 2009, nandalo ny ISO9001: 2015 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena, nanitatra ny haavony tamin'ny taona 2010 mba handrakotra faritra 8,500 metatra toradroa, nanokatra sampana tao Huizhou tamin'ny 2017, mandrakotra faritra 30,000. metatra toradroa, ary manana mpiasa 600 eo ho eo amin'izao fotoana izao, misy fizarana 3 orinasa: sampan-draharahan'ny lalao birao, sampana fandraharahana kilalao elektronika fanabeazana ho an'ny ankizy, sampan-draharaham-barotra boutique fonosana.
Fanontana fandraharahana sehatra: board lalao, sary boky, telo-dimensional boky, fanabeazana ankizy kilalao elektronika, fampianarana fitaovana, boutique loko boaty, avo-end fanomezana boaty, matihanina manome mpanjifa vokatra vita pirinty isan-karazany. Fitaovana famokarana: Heidelberg milina fanontam-pirinty, menaka milina, poloney milina, laminating milina, labiera milina, tsindrona milina, SMT, tariby fatorana milina, blister milina, nomerika milina, fanapahana fandriana, miforitra milina, sns Quality antoka: miaraka amin'ny feno napetraka ny fitaovana fitiliana kalitao sy ny ekipa teknika matihanina mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra fanontana mpanjifa.